SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲဟီဘရူးဝေငှ | Data Recovery
နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲဟီဘရူးဝေငှ
OS ကိုတည်ဆောက် software ကိုRescuePRO®သင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကို download လုပ်ပါဖို့အောက်ကညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ :
1. အောက်ပါထံမှ, သငျသညျ SanDisk လွန်ကဲကဒ်နှင့်အတူလက်ခံရရှိသောကူပွန်ကို Select လုပ်ပါ.
>>>>အဖျား: အဆိုပါကူပွန်RescuePRO®RescuePRO®သို့မဟုတ် Deluxe စာဖြင့်ရေးသားပါလိမ့်မည်, တဖန်သင်တို့အညီရွေးချယ်ရမယ်.
**** သင်တစ်ဦးကူပွန်RescuePRO® SSD ကိုရှိပါက, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ2. သင်ရွေးချယ်ထားသောကူပွန်အောက်ပေါ်လာသောခလုတ်တွေထဲမှာ, သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီသော button ကို Select လုပ်ပါ.3. အဆိုပါရည်ညွှန်းကိုးကား LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် activation code ကိုများအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကြည့်ဖို့ သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်မှတဆင့် RPRID.** ** မှတ်ချက်: သငျသညျနံပါတ်စဉ်ကစတင်ခဲ့သည် RescuePro Deluxe များအတွက်ကူပွန်ရှိပါက- RPRID-0305,
သင့်လျော်သောနံပါတ်စဉ်များအတွက်. http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ ထိုအခါ, သင်ကနံပါတ်စဉ်များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည် RPRID-0305 သင့်ရဲ့ SanDisk မှပြီးပြည့်စုံနေတဲ့အစားထိုး. **
אם אתה משתמש ב- Windows XP, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ עבור עותק תואם XP תקן RescuePRO® או ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ עבור עותק תואם XP של דלוקס RescuePRO®.